“Uzokwelapha” iziguli usomahlaya odumile | Eyethu News
“Uzokwelapha” iziguli usomahlaya odumile
USOMAHLAYA waKwaDukuza odumile, uHallo Comedia, uzoqalisa ngohlelo lokuvakashela izibhedlela ngenhloso yokulekelela iziguli ukuthi zisheshe zilulame, esebenzisa ukuhleka njengendlela yokwelapha.
Usomahlaya uHallo Comedian
Ngesikhathi exoxisana ne-iLembe Eyethu namuhla ngoLwesine, lo somahlaya osemncane futhi osezakhele udumo ngamahlaya akhe kuso sonke isifundazwe saKwaZulu-Natal, uthe kulolu hlelo uzobe ehambisana nabanye osomahlaya abavela KwaDukuza kanye nesisefundazweni saKwaZulu-Natal Sisonke. Uthe bazobe bevakashela iziguli ezibhedlela ezahlukene njengemizamo yokuzenza zikhohlwe yisinhlungu ezibhekene nazo, futhi zisheshe zilulame.
“Ukuhleka kuyamusiza umuntu, noma ngabe upthethwe yizinhlungu zomzimba noma ezenhliziyo. Siyaqaphela futhi ukuthi abanye abantu abagcwele ezibhedlela akukhona ngoba basuke begula ngokomzimba ngempela, kodwa yingoba basuke benezinkinga ezimpilweni zabo, bagcine sebephethwe yingcindezi nokwenza bagcine bengasaphilile nasemzimbeni.
“Imindeni eminingi inamalunga alele ezibhedlela. Sithi njengosomahlaya sifisa ukufinyelela kubo bonke labo bantu, sibaphe isipho sokuhleka,” kubeka lo somahlaya.
Uthe lolu hlelo luzoqala ngenyaka ka-Ephreli, nalapho behlose ukuthi baqale ngokuvakashela isibhedlela sase-Stanger kanye nasase-Umphumulo endaweni yaKwaMaphumulo.
Unxuse kakhulu amalunga omphakathi kanye nosomabhzinisi ukuthi bafake isandla kulolu hlelo. “Njengoba ngizobe ngihambisana nosomahlaya abaningi nje, kufanele ngibakhokhele izinto zokuhamba ngibuye ngibazamele nokuya ngasethunjini. Kanti futhi neziguli kufanele siziphathele izipho ngale kwamahlaya. Ngiludinga kakhulu usizo kulolu hlelo,” usho kanje.
Uthe abafisa ukufaka ukuphosa itshe esivivaneni bangaxhumana naye kwethi (072) 478-5285, noma baxhumane naye kwi-Facebook (Hallo Comedian).
Kuzokwethulwa isikole sokumodela eScottsville